पसल र गाेदामसँगै ज'ले हुसेनका दुई छोरा !
पसल र गाेदामसँगै ज’ले हुसेनका दुई छोरा !
दाङ – जुत्ताचप्पलको गोदाम रहेको घरमा आगलागी हुँदा पाँच जनाको मृ’त्यु भएपछि तुलसीपुर शो’कमा डु’बेको छ। दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली दिन र परिवारजनमा समवेदना दिन तुलसीपुर बजार बन्द हुने भएको हो।
शुक्रबार तुलसीपुर बजार बन्द गरिएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव विनिल केसीले बताए। इरम फुटवेयर चप्पल गोदाममा आगलागी हुँदा शुक्रबार नि’स्सा’सिएर गोदाम धनी र अर्को एक परिवारका पाँचजनाको मृ’त्यु भएको थियो। जसमा पसल तथा गोदाम सञ्चालक हुसेन बकसका दुई छोरा र अर्काे परिवारका तीन जनाको मृ’त्यु भएको हो।
मृत्यु हुनेमा सुर्खेत घर भई हाल भाडामा बस्दै आएका बक्सका दुई छोरा १६ वर्षीय मसिन बकस र १४ वर्षीय हसन बकस रहेका छन्। त्यस्तै अर्घाखाँची घर भई हाल सोही घरमा भाडामा बस्दै आएका ४० वर्षीय नगरदिन अली, उनका १३ वर्षीया छोरी सुजिता खातुन अली र ५ वर्षीय छोरा अविददिन अलि रहेका छन्।
आगलागी भएको घर बैंकका पूर्वकर्मचारी बक्सबहादुर केसीको हो। सिंगो घर भाडामा दिइएको थियो। तल्लो तलामा अगाडि चप्पल पसल र पछाडि गोदम थियो। सोही घरमा शुक्रबार बिहान २ बजेतिर आगलागी भएको हो।
आगो कम भएपछि साढे ७ बजेतिर श”व निकालिएको थियो। घरको तेस्रो तलाबाट ३ जना र चौथो तलाबाट २ जनाको श”व निकालिएको हो। पाँचै जना नि”स्सा’सिएर मृ’त्यु भएको प्रहरीले बताएको छ।
‘तेस्रो तलामा रहेकाहरु नि”स्सा”सिएर मृ”त्यु भएको जस्तो देखिन्छ’, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले भने, ‘चौथो तलामा रहेकाहरु अलिअलि जलेका थिए।’ उनका अनुसार विद्युत स”र्ट हुँदा आगलागी भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुुर, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयको सक्रियतामा आगो नियन्त्रणमा लिइएको छ। तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। पहिलो तलाबाट आगलागी सुरु भएको बताइएको छ।